कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेष्ठ ९ गते बिहिबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०८, २०७६१६:४६ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल जेठ ९ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१९ मे २३ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ बछलागा। ज्येष्ठ कृष्णपक्ष। तिथि– पञ्चमी, २८:२७ बजेउप्रान्त षष्ठी। नक्षत्र– पूर्वाषाढा, ६:०१ बजेउप्रान्त उत्तराषाढा। योग– शुभ, ११:५० बजेउप्रान्त शुक्ल। करण– कौलव, १५:४६ बजेदेखि तैतिल, २८:२७ बजेउप्रान्त गर। आनन्दादिमा धाता योग। चन्द्रराशि– धनु, १२:२८ बजेउप्रान्त मकर। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:१३ बजे, सूर्यास्त– १८:४९ बजे र दिनमान ३३ घडी ५९ पला।
आज तपाइँ हानिकारक विचार, व्यवहार र आयोजन बाट टाढा रहनु होला । नत्र शारीरिक आलाश्य एवम् व्याकुलता बढ्नेछ । स्वास्थ्य ठिकै रहनेछ । कार्य सरलता मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धीको साथ वादविवाद मा नउत्रिनु होला । मध्याहन पश्चात परिस्थितिमा सुधार आउनेछ । आर्थिक योजना ठिक तरिका संग सम्पन्न गर्न सक्नु हुनेछ ।
सरकार विरोधी कार्य एवम् प्रवृत्तिबाट टाढा रहनु होला । नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु नै उचित हुनेछ । स्वास्थ्यमा खराबी आउन सक्दछ । मन चिन्तित रहनेछ । वाणी र व्यवहारमा ध्यान दिनु होला । व्यवसायमा आपत्ति आउन सक्दछ । भाग्यले साथ दिने छैन । सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ ।
आजको दिन सुख शान्तीपूर्वक बित्नेछ । मनलाई प्रशन्न र हल्का गराउनको लागी मनोरंजनको साहारा लिनु हुनेछ । स्नेहीजन र मित्रलाई पनि यसमा शामिल गराउनु हुनेछ । मध्याहन पश्चात मन चिन्ताग्रस्त रहनेछ । संवेदनशीलताको मात्रा बढ्नेछ । क्रोधमा संयम राख्नु होला । स्वास्थ्यमा खराबी आउन सक्दछ ।
निकै ठुलो आर्थिक लाभले तपाइँको प्रतिक्षा गर्दै छ । व्यवसाय गर्नेहरुको लागी आजको दिन लाभदायी छ । मध्याहन पश्चात मनोरंजनको निम्ति कतै जाने अवसर मिल्नेछ । मित्रको साथ प्रवास-पर्यटनमा घुमफिर या मिष्ठान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ । व्यापारमा भागीदारीको साथ माभ्दायक विचार विमर्श हुनेछ ।
साहित्य-कला प्रति आज विशेष रुची रहनेछ । मध्याहन पश्चात आर्थिक संकटको अन्त्य हुनेछ । घरको वातावरण आनन्दमय रहनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । व्यवसाय गर्नेहरुलाई व्यवसायमा लाभ हुनेछ ।
शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहन विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । माताको स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ । स्वजन माथी आपत्तिजनक प्रसङ्ग आउन सक्छ । धन हानीको योग छ । पानीबाट सम्हालिएर रहनु होला । यात्रा प्रवास नगर्नु नै उचित देखिन्छ । क्रोधमा संयम राख्नु होला । सन्तानको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ ।
नयाँ कार्यको प्रारम्भको लागी आजको दिन निकै अनुकुल छ । आध्यात्मिक विषय तथा गूढ रहश्य प्रति विशेष आकर्षण रहनेछ ।मध्याहन पश्चात स्फूर्ति र प्रशन्नताको अभाव रहनेछ । घरमा कलेशको वातावरण रहनेछ ।
परिवारको साथ भ्रान्तीको स्धिक सम्भावना छ । कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्ने छैन । मनमा द्विविधा रहनेछ । कार्यभार अधिक रहनेछ । मध्याहन पश्चाता मनको ग्लानि हट्नेछ । साथै आनन्द र प्रशन्नता छाउनेछ । मित्र तथा स्नेहीजनको साथ मेलजोल बढ्नेछ । भाग्यव्रिद्धि हुनेछ ।
आज आर्थिक लाभ मिल्न सक्दछ । स्नेहीजनको घरमा कुनै मांगलिक प्रसङ्गमा उपस्थित हुनु पर्नेछ । दाम्पत्यजीवनमा सुख र आनन्द मिल्नेछ । गरेको कार्यमा अपेक्षित परिणाम नमिल्दा निराशा छाउनेछ । तपाइँको मन कुनै एक निश्चित निर्णय लिन सक्नु हुँदैन ।
मनको व्यग्रताले शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । वाणी र व्यवहारमा संयम राख्नु होला । मध्याहन पश्चात स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । मनमा प्रशन्नता छाई रहनेछ । धर्म-ध्यान र दयाभावना बढ्नेछ।
आजको दिन लाभदायी रहनेछ । सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रगती हुनेछ । मध्याहन पश्चात स्वास्थ्यमा खराबी आउनेछ । पारिवारिक वातावरण खासै राम्रो रहने छैन । व्यवहारमा निकै ध्यान पुर्याउनु होला । अधिक धन खर्च हुनेछ ।
विचारमा दृढता रहने छैन । व्यवसायमा शिर्ष अधिकारीबाट लाभ हुनेछ । पदोन्नतिको योग छ । परिवारमा सुख शान्ती रहनेछ । व्यापार सम्बन्धित आयोजना हुनेछ । मित्रको साथ रमणीय स्थलको आयोजन हुनेछ । आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक दृष्टिकोणले लाभदायी दिन छ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक २५ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २३, बिहीबारको राशिफल !
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २८ गते शनिबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक ०३ गतेको राशिफल